के छ नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमा ? (पूर्णपाठसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के छ नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमा ? (पूर्णपाठसहित)
के छ नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमा ? (पूर्णपाठसहित)
भदौ ८ गते, २०७७ - २०:५४
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा एउटा अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्षले पार्टीको काम सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधानका लागि पार्टी अध्यक्षद्वले कार्यदल गठन गरे। कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाए।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा एउटा अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्षले पार्टीको काम सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। यसैगरी, प्रतिवेदनमा महाधिवेशनको तयारी गर्ने,पार्टी एकताको काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउने रहेको छ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने,प्रचलित मान्यता अनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नेलगायत पनि प्रतिवेदनमा छन्।
पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न कुराहरू,स्थायी कमिटीमा उठेका विभिन्न कुराहरूको सम्बन्धमा राय सुझाव दिइएको छ। पार्टीमा उत्पन्न समस्या,अन्तरविरोधको समाधान खोज्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने आशयबाट प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा विवाद समाधानका लागि प्रस्ताव तयार पार्न केहीदिन अघि कार्यदल गठन भएको थियो। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे,भीम रावल,पम्फा भुसाल,जनार्दन शर्मा र शंकर पोखरेल छन्।
भदौ ८ गते, २०७७ - २०:५४ मा प्रकाशित